Trump oo shaqada ka eryay xoghayihiisii arrimaha dibedda Rex Tillerson | Berberanews.com
Home WARARKA Trump oo shaqada ka eryay xoghayihiisii arrimaha dibedda Rex Tillerson
Trump oo shaqada ka eryay xoghayihiisii arrimaha dibedda Rex Tillerson
adminMar 13, 2018WARARKA
Hargeysa-(Berberanews)-Madaxweyne Donald Trump, ayaa ka qaadey xilkii xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka Rex Tillerson, isagoo ku badaley Mike Pompeo oo ah madaxa hey’adda sirdoonka ee CIA-da.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ugu mahadcelinayo xoghaye Tillerson shaqadii uu soo qabtey, isagoo dhanka kale sheegay in xogyaha cusub uu qaban doono shaqo cajiib ah.
Tillerson, oo ahaa madaxii hore ee shirkadda ExxonMobil, ayaa loo magacaabay jagadan sanad uun kahor.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay Gina Haspel, iney noqoto haweeneydii ugu horeysay oo madax ka noqota hey’adda sirdoonka CIA-da.
Waxaa jiray warar sheegaya inay jireen kala aragti kala duwanaansho Rex Tillerson iyo Aqalka Cad, iyadoo Mareykanku uu wajahayo xaalad sugnaansho la’aan la xidhiidha siyaasaddiisa arrimaha dibedda, gaar ahaan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan.
Tillerson ayaa laga soo wariyey inuu aad ula yaabay sida ay u hoosayso aqoonta Trump uu u leeyahay maareynta siyaasadda dibadda.
Previous PostMadaxweynaha Somaliland iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Hargeysa kaga baqoolay diyaarad khaasa oo Imaaraadku u soo diray Next PostWaa maxay sababta Yurub iyo Maraykanku u colaadiyaan Turkiga?